जग्गा किन्दा फस्नुहोला है ! बिचार गर्नुहोस् – Latest News, Video, Entertainment,Health
जग्गा किन्दा फस्नुहोला है ! बिचार गर्नुहोस्
August 6, 2019 September 8, 2019 Info-Kantipur	0 Comments
आफ्नो घर बलियो र सुरक्षित होस् भन्ने चाहना सबैको हुन्छ । सामान्यतया जीवनमा एकपटक बनाइने घर कमजोर र जोखीमपूर्ण भयो भने निर्माण लागत त डुब्छ नै, त्यस्तो घरमा बस्न पनि डर हुने गर्छ । घर कस्तो बनाउने भन्ने कुरा धेरै हदसम्म जग्गामा निर्भर रहन्छ । जग्गाको प्रकृति तथा अवस्थितिले घरको डिजाइनमा निकै ठूलो प्रभाव पार्छ । साथै, जग्गाले घर बलियो बनाउन ठूलो भूमिका निर्वाह गर्छ । जग्गाको प्रकृतिकै कारण धेरै जनाले आफूले सोचेको डिजाइनमा घर बनाउन नपाएका उदाहरण धेरै छन् । त्यसैले यदि तपाईं पनि घर बनाउने योजनामा हुनुहुन्छ भने त्यसका लागि जग्गा कत्तिको मिलेको छ वा आफूले सोचेको डिजाइनमा ढाल्न उपयुक्त हुनेरनहुने कुराप्रति सचेत रहनुपर्ने आर्किटेक्ट तथा सिभिल इञ्जिनीयरहरूको सुझाव छ । घर सुरक्षित तथा सबै कोणबाट मिलेको हुनुपर्छ । मिलेको जग्गा भएमा उत्कृष्ट डिजाइनमा घर तयार पार्न सकिने मात्र होइन, त्यसले परिवारमा सुख तथा शान्ति कायम राख्न पनि मद्दत पुर्याउँछ । कस्तो डिजाइनको घर बनाउन कस्तो वा कति जग्गा चाहिन्छ भन्ने कुरा आर्किटेक्टलाई थाहा हुन्छ । जग्गा तथा खाली ठाउँ व्यवस्थापनको पाटो पूर्णरूपमा आर्किटेक्टको हो । तर जग्गा खरीद गर्दा आर्किटेक्टको राय लिने चलन हामीकहाँ अत्यन्त न्यून छ । जग्गाको छनोट उपयुक्त नभएमा बलियो घर बनाइए पनि भूकम्पको सानो धक्काले समेत घर जगैदेखि ढल्न सक्ने इञ्जिनीयरहरू बताउँछन् । कालो र हलुका माटो मात्रै भएको जग्गामा ठूला घर बनाउन उपयुक्त नहुने सुझाव उनीहरूको छ ।
नापीनक्सा, कित्ताकाट, नम्बरी, प्रति कस्तो जग्गा हो, सिम, चहार, गुठी, रैकर, मोहि लागेको हो कि, अदालती कारबाही चलिरहेको छ कि भन्ने विषयमा निश्चित हुनुहोस् । जग्गा कुन हो, कित्ता नम्बर कति हो, गुठीको हो कि, मोहियानी छ कि, धितो बन्धक छ कि, अदालतमा मुद्दा परेको छ कि आदि सबै कुरा मालपोत कार्यालयबाट थाहा पाउन सकिन्छ । त्यति मात्र नभएर त्यो जग्गाको मूल्य कति हो, वरपर कति रुपैयाँमा कारोबार भएको छ, चलनचल्ती र सरकारी मूल्याङ्कन कति छ भन्ने जस्ता जानकारी पनि मालपोत कार्यालयबाट लिन सकिन्छ । source:malpotkhabar
← धनी बन्न मुकेश अम्बानीका यी ८ सुत्र पछ्याउनुस्
Trekking safety in Nepal →
झुक्केर पनि यी २ शब्दको प्रयोग रिस उठ्यो भन्दैमा महिलाहरु माथि गर्नुहुँदैन !
September 13, 2019 September 13, 2019 Info-Kantipur 0